AMBOLONKANDRINA : Lehilahy iray nifanenjehan’ny polisy tamin’ny fiarakaretsaka | NewsMada
AMBOLONKANDRINA : Lehilahy iray nifanenjehan’ny polisy tamin’ny fiarakaretsaka
Lehilahy iray, lehibe sady ranjanana nitondra fiara iray Peugeot 605, no nifanenjehan’ny polisy niainga teo Ambanidia hatrany Ambolonkandrina omaly tolakandro. Fiarakaretsaka iray no nentin’ireo polisy nanenjika ity lehilahy nitondra fiara ity tamin’izany ary polisy telo lahy izy ireo no tao anatin’io fiara io niaraka tamin’ny vehivavy iray nipetraka teo aloha.
Rehefa tonga teo Ambolonkandrina ny fiara nentin’ity lehilahy ity, nisy fiara kamiao lehibe iray nijanona teo amin’ny sisin-dalana ka nodominy dia lasa izy nanohy ny fitsoahany. Tsy afaka kelin’izay indray, nandona fiarakaretsaka iray hafa indray izy, saingy tsy nahasakana ny fandosirany izany.
Taksibe iray nijanona teo ampovoan-dalana avy eo no tsy nahitany irika hitsoaka intsony ka teo izy no voasambotra. « Rehefa tsy tafatsoaka intsony ny fiara dia nivoaka ilay lehilahy ary nikasa ny mbola handositra indray, saingy tonga aloha ireo mpitandro filaminana. Namaly izy avy eo ka avy hatrany dia novelesin’ny iray tamin’ireo polisy tamin’ny hazo teny an-tanany. Naverin’ireo mpitandro filaminana niditra tao anaty fiara izy avy eo ka niditra tao ihany koa ireo polisy dia nentiny nanaraka azy ilay lehilahy sy ny fiarany », hoy ny fitantaran’ny nanatri-maso ity tranga ity.
Fotoana fohy, nitangorona ny mponina teny Ambolonkandrina nijery ity tranga ity, saingy nasain’ireo mpitandro filaminana niparitaka ary lasa izy ireo. Tsy mbola fantatra hatreto ny antony nisamborana ity lehilahy ity. Andrasana, araka izany, ny fanazavana hoentin’ny eo anivon’ny polisim-pirenena.
Raha nisy kely, hoy ihany ireo nanatri-maso, dia tsy nahazo an’ity fiara ity ilay fiarakaretsaka nentin’ireo polisy satria efa nanomboka namoaka setroka be tao amin’ny moterany niakatra ny fiakarana teny an-toerana. « Tsy nisy fiara hafa afa-tsy fiarakaretsaka ve afaka nentin’ireo polisy ireo ? Ohatra hoe fiara tsotra hafa mandeha tsara sy afaka hanarahan-dia tsara. Mety hilaza mantsy izy ireo hoe tsikaritry ny olona arahina, raha fiara maitsobe misy soratra hoe polisy no entina », hoy ihany ny fanamarihana nataon’ny fokonolona.